सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले कमायो ५ करोड ४३ लाख नाफा, प्रतिशेयर आम्दानी रू. १९.४१
मंसिर १, काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण बुधवार सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले चालू आवमा रू. ५ करोड ४३ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत आवमा कम्पनीले रू. ५ करोड ७ लाख नाफा कमाएको थियो ।
चालू आवमा कम्पनीको आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १२ करोड रहेको छ । चालू आवमा कम्पनीले जगेडामा रू. ३६ करोड ७५ लाख ६४ हजार र बीमा कोषमा रू. १ अर्ब २ करोड ३३ लाख सञ्चित गरेको छ ।
त्यसैगरी चालू आवमा कम्पनीले रू. ६९ करोड ९७ लाख कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यो बीमाशुल्क गत आवको तुलनामा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू.१९ दशमलव ४१(वार्षिक), मूल्य आम्दानी अनुपात ४४ दशमलव ९३ गुणा र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २३१ दशमलव १८ रहेको छ ।
६ महीनामा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको नाफा ४९ प्रतिशतले वृद्धि
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडद्वारा १५ .७८ % लाभांश घोषणा
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको नाफा २२.६७ % वृद्धि
१ अर्ब बढी बीमाशुल्क आर्जन गरेको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको नाफामा भने कमी